Namidin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Bossert any Brooklyn
HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
1 JANOARY 2013
Namidin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Hotel Bossert teo Aloha
BROOKLYN, N.Y.—Namidin’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’i David Bistricer, ao amin’ny Clipper Equity, sy ry Chetrit ilay Hotel Bossert teo aloha, izay any amin’ny 98 Montague Street, any Brooklyn Heights. Vita tamin’ny 1909 ny Bossert, ary tamin’io taona io koa no nafindra tany Brooklyn Heights ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Nanomboka nampiasa an’io trano io ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 1983, ary novidiny ilay izy tamin’ny 1988. Nohavaozina ilay trano manontolo mba hifanaraka amin’ny fenitra napetraky ny vaomiera mpiaro ny vakoka. Lasa tsara tarehy sy mihaja be toy ny taloha ilay trano rehefa vita, ka nahazo mari-pankasitrahana ny Vavolombelon’i Jehovah.
Vao haingana izay, dia natambatry ny Vavolombelon’i Jehovah ny asa sasany ataony any Brooklyn ka nihavitsy ny olona miasa any. Mihena koa àry ny trano fonenana ilaina any Brooklyn ka namidy ilay trano.
Hoy i David Semonian, mpitondra tenin’ny Vavolombelona: “Nahafinaritra anay ny nikarakara ny Bossert nandritra an’izay 25 taona izay. Tsara tarehy ilay trano ary tena nandray anjara be teo amin’ny tantaranay.”